ngu admin ku 20-06-30
Sawubona, wonke umuntu.hawu manje umkhiqizo womphakathi wethu wakamuva: I-Ocean Rocking Horse. inzuzo yethu, iphephile kepha ithandwa ngabantu abafuna ukuzijabulisa, izingane zingagxuma zisuka kwesinye ziye kwesinye, ikhwalithi yayo yinhle kakhulu, yenziwe nge-PE. ngicabanga ukuthi kuzothandwa ezweni lakho. Uma ufuna ukwazi imininingwane eminingi, unga ...
Ukuthi Ingane Yakho Ihlala Kangakanani Ixhomekeka Kwizinto Zokudlala Zezingane
Angazi ukuthi zisebenza kanjani izinto zokudlala zezingane? Le yinkinga ebhekene namakhasimende amaningi asanda kungena ebhizinisini. Kunamabhizinisi amaningi okuphendula amakhasimende angalungile kangako njengoba ecabanga. Eqinisweni, lokhu akuyona inkinga yedivayisi. Uma sikhetha abaphathi abalungile ...
Izingane ezinjengesipho, kufanele zingabi ngamathoyizi, ukwakheka okujabulisayo kungaletha injabulo engapheli enganeni. Imishini yokudlala yezingane Ezinye izinto zokuhlobisa ubuhle nezixhobo zokudlala zezingane zingaba yingozi ezinganeni. Minyaka yonke, zingaphezulu kuka-100,000 izingane ...
1. Kufanele kunqunywe iqembu leminyaka le-Naughty Fort Paradise. Kuyisikole esihle esineminyaka engu-0-6, noma ungena nje esikoleni. 2. Indawo ye-Naughty Fort Paradise nayo ibhekwa njengemihle. Uma lincane kakhulu, lingathinta izinkinga zebhizinisi zesikhathi eside. Kumele ihlolwe ngokucophelela ...